Puntland oo ka hadashay Doorashada iyo Xaalada Guud ee P.land kana digtay Faragelin DF Soomaaliya | KALSHAALE
Puntland oo ka hadashay Doorashada iyo Xaalada Guud ee P.land kana digtay Faragelin DF Soomaaliya
Garoowe ( Kalshaale ) Warsaxaafadeed kasoo baxday madaxtooyada Puntland ayaa looga hadlay xaalada siyaasadeed ee Puntland iyo doorashada la filayo in ay dhacdo 8-Janaayo 2019.
Go’aamada DALKA PUNTLAND waxaa ka masuul ah Dowladda DALKA PUNTLAND. Dalka Puntland wuxuu leeyahey Madaxweyne ilaaliyo QARANNIMADA DALKA PUNTLAND.
Waxaa jirey ayaamahaan in Dalka aan dariska nahey ee Soomaaliya wadey faro-galin lagu qalqalgelinhayo xasiloonida DALKA PUNTLAND.
Madaxweyne kuxigeenkii DALKA PUNTLAND wuxuu noqdey mid u adeego Dalka aan dariska Nahey ee Soomaaliya, wuxuu noqdey mid fuliyo Amarada Caasimadda Dalka Dariskaa ee Mugadisho, kana daneystey Danahii hoos jooga Madaxweynaha DALKA PUNTLAND.
Sidaas daraadeed waxaan u sheegeynaa Shacabka Dalka Puntland ineysan ku dhex milmin Shacabka Dalka dariskaa ee Soomaakiya.
-Madaxbanaanida DALKA PUNTLAND waa DASTUURI aan lagu xad gudbikarin.
Dastuurka Dalka Puntland kuma qorna sharciga One man one vote, maxaa yeeley Calooshaada lama tuso cadowgaada. Nin la tiriyey talo farihiisa kuma JIDHO.
Sidoo kale waxaa meesha ka baxahayo Kaltanka Dastuurigaa ee jufada Max’uu Saleemaan.
Boowe anigoo Beel-daaqe heysto maxaa SANTUUQ QARSOON II GEEYEY.
Dadka ayaa lagu qabooojiyaa hadalka ka soo horjeeda dawlada Somaliyeed.
Waxaa jira wax ay Majeerteenka iyo Isaaqu wadagaan oo qayb ka noqday dhaqankooda.
Labadaa Bulsho waxay jecelyihiin Beenta.Marka la rabo in wax loo sheego waxaa loo sheegaa inay yihiin dawlad,qaran iyo dad wax qabsaday.Marka ay jirto arin lagu kala jabsanyahay waa in la yidhaa”Dawlada Somaliya ayaa faragalin nagu haysa”.Xamarbaa wax laga soo abaabulay.Tani waa q
Soory waa layga boobay.
Madaxda maamulada Hargeisa iyo Garoowe eed kasta waxay saaraan Muqdisho si ay dadkooda u qaboojiyaan.Eeedaha ama dambiyada iyagu ma qirtaan.Tani waa qaabka ay dadkooda u hogaamiyaan.
Waxa kale oo ay ka simanyihiin inay eeyar iska qaataan wixii lacag ah ee ka yimaada Muqdisho.
Hadii xagaa iyo Muqdisho afka lagu taago Bulshooyinkaasi way degaan oo muddo ayaa lagu jiraa buuq la’aan.
Labadaa Bulsho ma maqlikaraan dawlad Somaliyeed ayaa wax qabatay iyo maamulku wuu soo hagaagayaa.Labadaa Bulsho aadbay ugu farxaan qaraxyada ka dhaca koonfurta Somaliya.
Dadku waaxay u tababaranyihiin qaab neceb wanaaga Somalinimada iyo wada jirka.Waxay u tababaranyihiin qaab uu qofku u diyaarsanyahay inuu basaas noqdo oo markasta cadow u ahaado Somalinimada.Waxay u dhismeen qaab ah in ay dhumanayaan hadii Ethopiya laga hoos baxo.
Waxaarada wacyigalinta Somaliya waa inay qorshaha ku soo daraan sidii dadkaasi loo wacyigalinlahaa.
Aboorkii iyo cayayaankii ma roob baa u da’ay
Qaar ka mida qoladii Camay magacaabay ee docfaruurka ahayd oo waa horeba diiday wixii loogu yeeray gudiga khilaafaadka shaagayna inaanay waxba ka ogeyn magacowga ayna u arkaan ina Camay nin docfaruur iyo fawdo wada.
Mr bahal iyo Dabshid hadaba roob ma di’ine gododkiinii isaga laabta kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk